နှစ်ချက်တဖက်သတ် mounting မြှုပ်တိပ်စေးကပ် pads China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:နှစ်ချက်ဖွဲ့ပွုပွငျ 'တိပ်,နှစ်ချက်ဖွဲ့ရှုပ်ထွေးသော Pad တက်ဘလက်များသည်,နှစ်ချက်ဖွဲ့မြှုပ်တိပ်
 Homeထုတ်ကုန်များပိတျထားသောတိပ်foam တိပ်နှစ်ချက်တဖက်သတ် mounting မြှုပ်တိပ်စေးကပ် pads
နှစ်ချက်တဖက်သတ် mounting မြှုပ်တိပ်စေးကပ် pads
လက်မှတ်: SGS/ISO/ ROHS
နှစ်ချက်တဖက်သတ် mounting တိပ်အမြှုပ်တိပ်ရေတွန်းလှန်, ဖုန်မှုန့်တင်းကျပ်စွာ, damp-သက်သေပြ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချေးခုခံ, ရေနံ-သက်သေပြ, အက်ဆစ်သက်သေပြ, အယ်လကာလီခုခံနှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများ, antibacterial, Non-အဆိပ်သင့်, အရသာမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ချက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ insulator တွင်လည်း, အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အအေးအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးအအေးကိုခံနိုင်ရည်နှင့် attenuation အသံစေးကပ် pads ဘက်။ နှစ်ချက်တဖက်သတ်အမြှုပ်တိပ်, ဖြတ်တပ်မက်လိုချင်သောအအရှည်နှင့်အခွံဘက်တဦးတည်းနှင့်နှစ်ဦးကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်ကပ်။
1. ထူးအိမ်သင်အထူ, စူပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျက်နှာပြင်, အကြမ်းခံအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်
3. အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
4. အမြင့်ခုခံ, ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
5. သာ. ကောင်း၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တားဆီးနှင့်အထွေထွေထုပ်ပိုးကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုစေ
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ပိတျထားသောတိပ် > foam တိပ်
foam mounting တံဆိပျကော်တိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက်တဖက်သတ် mounting မြှုပ်တိပ်စေးကပ် pads အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ဦးကိုတဖက်သတ်ကော်မြှုပ် mounting တိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက်ဖွဲ့ပွုပွငျ 'တိပ် နှစ်ချက်ဖွဲ့ရှုပ်ထွေးသော Pad တက်ဘလက်များသည် နှစ်ချက်ဖွဲ့မြှုပ်တိပ် နှစ်ချက်ဖွဲ့ကော်တိပ် နှစ်ချက်ဖွဲ့ရှုပ်ထွေးသောတိပ် နှစ်ချက်ဖွဲ့ကော်မြှုပ်တိပ် နှစ်ဦးကဘေးထွက်ပွုပွငျ 'တိပ် နှစ်ချက်ဖွဲ့ Pack တိပ်